Ubuchwepheshe bokushisela - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
I-American Welding Society AWS idinga amageji afanayo ama-weldments nama-welds azenzekelayo amasistimu amapayipi wensimbi angenasici angenacala. Lokhu kungenxa yokuthi kunamaphutha amaningi angenakugwemeka ekushiseni ngezandla. Isibonelo, ukwabiwa okungalingani kobuhlalu be-weld, ukuzungeza kodonga nobukhulu bodonga kusobala ukuthi akwanele, okuthinta ukusebenza kahle kwe-inthanethi kwe-CIP / SIP, futhi okubaluleke kakhulu okuqukethwe yipayipi. Kulula ukudala i-microbial over-standard phenomenon.
Ukushisela okuzenzakalelayo kwethrekhi kungagwema zonke izinhlobo zezinto ezingathandeki ezibangelwa ukuwelda kwendabuko mathupha. Lokhu akulona nje ushintsho lwezobuchwepheshe, ngoba ikhwalithi yezingxenye ezifakiwe idlala indima ebalulekile ekuhlangabezaneni nezidingo zokushisela okuzenzakalelayo.
I-Qiangzhong inganikeza izingxenye zokushisela ezihlangabezana nezidingo zokushisela isitimela okuzenzakalelayo kubasebenzisi emhlabeni wonke. Ngenxa yokuphikelela ukuphikelela kwenqubo yokuphepha yenqubo engenasici engenasici engenasici, sinesibopho nesibopho sokuthwala lo mthwalo futhi sinikeze amakhasimende izingxenye ezisezingeni zensimbi ezihlangabezana nokushisela okuzenzakalelayo kojantshi ukusiza amakhasimende ukuthi athuthukise inani lawo.